Baddu waa isha tamarta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tamarta baddu waxay ka timaaddaa tamarta suuragal ah, kinetics, kuleylka iyo kiimikada biyaha badda, taas oo loo isticmaali karo in lagu soo saaro koronto, Tamarta kuleylka ama biyaha la cabbo.
Farsamooyin aad u kala duwan ayaa loo isticmaali karaa, sida saldhigyada qulqulaya, Marawaxadaha biyaha hoostooda ka faa’iideysta mowjadaha iyo qulqulka badda, dhaliyaha kuleylka oo ku saleysan isbeddelka tamarta kuleylka of the badaha iyo nidaamyo kala duwan oo ka faa'iideysta tamarta hirarka iyo cusbada.
Tamarta ee badaha waa macquul in la tixgaliyo, laakiin waa mid aad u kala firidhsan oo sidaas darteed ay adag tahay in la soo ururiyo, waana ka fog tahay meelaha la isticmaalo. Midka kaliya ee ilaa hada la qabtay waa tamarta mawjadaha, laakiin kaliya meelaha qaar.
Marka laga reebo saldhigyada qulqulaya, teknoolojiyadaha badda waxay ku jiraan heer bandhig iyo mashaariicda duuliyeyaasha, qaar badan oo ka mid ahna waxay u baahan yihiin cilmi baaris dheeraad ah iyo horumarin.
Farsamooyinkaan qaarkood waxaa lagu gartaa kala duwanaansho xoog leh oo ah producción tamarta iyo heerarka saadaasha (tusaale ahaan, hirarka, baaxadda hirarka iyo durdurrada), halka kuwa kale ay u badan tahay in looga faa'iideysto si joogto ah, ama qaab la xakameyn karo (tusaale ahaan, tamarta kuleylka badaha iyo cusbada).
Macluumaad dheeraad ah - Kulaylku wuxuu wax ka beddeli doonaa mawjadaha badda
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Tamarta badaha
Levi's iyo jooniska-saaxiibtinimada leh ee laga sameeyay qashinka